e-Filing Iphepha Lasekhaya, Werhafu Yengeniso Kwisebe, Urhulumente India - Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
e-Filing Iphepha Lasekhaya, Werhafu Yengeniso Kwisebe, Urhulumente India
Wam izincomo KUYO Iqela kuba constantly ukulungisa oko
I-provisional amanani Ngqo Izinto qokelela phezulu ukuya kudisemba bonisa ukuba epheleleyo qokelela zi ku Rs
ngaphezulu kunokuba epheleleyo qokelela kuba ehambelanayo ixesha kulo nyaka uphelileyo.
I-provisional amanani Ngqo Izinto qokelela ukuya kwi-novemba bonisa ukuba epheleleyo qokelela zi ku Rs. ngaphezulu kunokuba epheleleyo qokelela kuba ehambelanayo ixesha kulo nyaka uphelileyo. CBDT sele yandise ngenxa umhla kuba filing Income Tax Ubuyisela zophicotho-Zincwadi ukusuka th oktobha ukuba st kuokthobha ngo. Nangona kunjalo, kuya kuba akukho ukwandiswa kwesivumelwano ngenxa umhla ngenjongo Inkcazo- Icandelo A (Inzala kuba ezimiselweyo kwi-furnishing kubuyela) lomthetho kwaye assessed uya kuhlala netyala kuba intlawulo inzala njengoko kuchaziwe kutshiwo kwisiqendu A Mthetho. Kule ndawo kakhulu umsebenzisi eyobuhlobo kwaye uhlaziyo banikwa ngokufaneleka. Ndisebenzisa le ndawo kuba e-filing ka-ubuyisela ukusukela yokugqibela eminyaka ukufumana lula kwaye ngokufaneleka ukuqhubela ka-refund ii-odolo. Ndaba i-mba ezakwa-credit yam ukuphucula izinto kuba AY - apho onayo kugqitywe thru 'e-Navara' ngaphakathi ixesha isakhelo. Ukuba zokufundisa inkonzo yam Clientle.wam enyanisekileyo enkosi lonke iqela amalungu.
Le portal sele zonke izixhobo kuba filing irhafu ubuyisela kwaye enxulumene ulwazi.
Ndinguye ninoyolo ukuba ezininzi salaried irhafu payers ngathi kum unako ifayile zabo ubuyisela-intanethi kunye honesty kunye nokubandakanyeka ngaphandle koloyiko oluntu-calulo. Ndim ke guqula ukuba Income Tax dept kuba egqiba wam umbuzo ngexesha kwaye ukugcina kum ezifanelekileyo ka-ubume. Yakho phulo kunye uhlobo imiqulu kuwe ukukhombisa u-ngu-commendable. Mna appreciate impendulo yakho kwaye ukugcina barhafi ezifanelekileyo kwaye ndonwabe. Indlela yiya iqela. Enkosi kakhulu Iinkangeleko Ezibalaseleyo Kwiwebhusayithi.
Kukho okuninzi ulwazi apha kwaye ngoko ke kulula ukuyisebenzisa.
Learnt ngayo yi-ngokwam. Akukho agents luyafuneka, akukho koyika luyafuneka.
Elula, kakhulu umsebenzisi banobuhlobo
EVC, onxulumanisa ka-Aadhar kwaye TAN, iifomu, xml, zonke phezulu-class. Ligcine phezulu Imibulelo Govt ka-India ne iwebhusayithi ababhekisi phambili. Kakhulu umsebenzisi eyobuhlobo KWAYE inkqubo ekhawulezayo. Ukuzalisa ITR akazange ngoko ke, kulula phambi. Kanjalo kulo nyaka uphelileyo emva ukuzalisa ITR wam refund onayo deposited kwi nxowa zingaphelanga iintsuku ezi- zomsebenzi. ENKOSI U WERHAFU YENGENISO KWISEBE kwaye URHULUMENTE e-INDIA. Wam KE ubuyisela kuba yokugqibela iminyaka ngonaphakade ukusukela ukuba oku kwaba conceived. Unyaka emva konyaka, mna unako ukufumana ukuba amava usebenzisa le webhusayithi ubizwa ngokuba bhetele kwaye ngcono. Ngenene impressed kunye indlela eli phulo usesinye kwenziwa. Siyavuyisana Ukususela ukususela ekuqaleni kuka-intanethi ubuyisela ndisebenzisa ziko, kusoloko engcono unyaka emva konyaka. Ndinguye emva kwexesha ukuncoma kodwa Portal ingaba ngenene comment kakhulu umsebenzisi banobuhlobo. Mnandi phulo ngo-Income Tax i-India, le webhusayithi igcina ilanlekile ixesha kwaye omkhulu inyathelo lesi-ngakulo Yedijithali kwaye Cashless e-India. Ngonaphakade ukusukela CPC yamiselwa, kokufaka ubuyisela-intanethi sele kuba lula kakhulu. Ingakumbi kuba abo ngathi kum abakhoyo seniors unako ukuhlala ekhaya kwaye yenze.
Kanjalo ukuqhubela kwaye yokufumana refund ngu kuyakhawuleza.
Ingozi enkulu enkosi Urhulumente. Iluncedo kakhulu kwaye convenient portal. Convenient ngenxa namnye unako uphephe i-trouble ka-makhaya NGAYO ofisi(ngaphandle kokuba personal ubuso wabiza) kwaye unako settle yonke imiba enxulumene NGAYO yi-ehleli ekhaya. Enkosi kuba septemba wam grievance kwaye umyalezo kwi-bam mobile. PHANTSE ZONKE IINKETHO IYAFUMANEKA KWI-INTANETHI NGAPHANDLE KUFUNEKA UTYELELE I-INCOME TAX-OFISI OKANYE KUHLANGANA NA AMAGOSA. OLUKHULU KWAYE THUMBS PHEZULU LONKE IQELA. Ezibalaseleyo kule ndawo, nangona andinguye ngobukho ezahlukeneyo imigaqo nokuchaza, kodwa le site ngu iluncedo kakhulu kuba abantu ngathi kum ukwenza i-intanethi irhafu kubuyela kwaye lula jonga ubume ukuba kukho nayiphi na kuxhomekeko intshukumo ukusuka wam icala. Portal ngu umsebenzisi-banobuhlobo. Nayiphi na Grievances izicelo ingaba ngoko nangoko kwizifundo, nemiba kugqitywe ngokukhawuleza.
Overwhelmed kunye spontaneous impendulo kuba nayiphi na imibuzo ephathelele.
Akukho yomnye umntu uncedo olufunekayo ukuze filing ubuyisela njalo-njalo.
njengoko i-portal ngu mna-ingcaciso gabalala.
Heartfelt appreciations ukuba lonke iqela. Le ndawo yi best bazibona kwi kwi- x ubungakanani kunye imihla inguqulelo ye-chrome, i-Firefox, Safari-Intanethi Forte.
Ingeniso-Irhafu Isebe AKAZANGE acele yakho PIN, amagama okugqitha okanye efanayo ukufikelela ulwazi ye-credit amakhadi, iibhanki okanye ezinye ii-akhawunti zemali nge-e-mail.
Ingeniso-Irhafu Isebe ibongoza barhafi HAYI nqakraza amakhonkco aphezulu equlethwe kulo enjalo phishing ukubhala phezu kwayo, HAYI ukuphendula, kwaye INGABI share iinkcukacha ezinxulumene zabo ikhadi lebhanki letyala, bank nezinye-mali iinkcukacha ze-akhawunti. Nceda hlaziya yakho nabo njengoko kuthe utshintsho. Oku kuza kwenza kuthi ngalo kuwe ngomhla ezahlukeneyo kakhulu ulwazi isaziso Ukuba unayo sele ezenziwe sesi sibini ukubuya, kufuneka ufake iinkcukacha phantsi 'Filing lomthetho Werhafu Yengeniso Kubuyela'. Ukuba akunjalo, kufuneka ahlawule irhafu yakho kwaye ifayile ukubuya. Iqhosha ukuhlawula Kwangethuba Irhafu okanye Mna-Assessment Irhafu. Inkqubo iza ngqo kuwe ukuhlawula Irhafu ulwazi lomsebenzi Womnatha iwebhusayithi kwagcinwa yi-NSDL kuba intlawulo irhafu. Unyuso - e-Ifayile-tab yesi - Cofa 'Impendulo imali eseleyo Irhafu Yamanzi' (ukubonisa i-irhafu yamanzi) okanye Nqakraza 'e-Ahlawule Irhafu' (Ukwenza phambi-wazaliswa Challan kuba intlawulo) Oku kukwazisa ukuba ngokunqakraza udidiqaccel-ikhonkco, uza kuba eshiya e-Filing Portal kwaye ungena iwebhusayithi mahlanu nge ngamanye amaqela. Ezinjalo amakhonkco zilungiselelwe kuphela kuba ukunceda ka-umxhasi kwaye e-Filing Portal akakwazi ukulawula okanye endorse enjalo websites kwaye akanaxanduva zabo imixholo. Ukusetyenziswa ezifana websites kanjalo ngokulawulwa imigaqo yokusebenzisa kunye neminye imiqathango nezikhokelo, ukuba ikhona, equlethwe ngaphakathi ngamnye enjalo kwiwebhusayithi. Kwimeko apho ukuba nayiphi na imiqathango equlethwe apha ungquzulwano kunye imigaqo yokusebenzisa okanye eminye imiqathango nezikhokelo equlethwe ngaphakathi enjalo iwebhusayithi, ngoko ke imigaqo yokusebenzisa kunye neminye imiqathango nezikhokelo kuba abanjalo iwebhusayithi uya koyisa. Iqhosha ukuhlawula Kwangethuba Irhafu okanye Mna-Assessment Irhafu. Inkqubo iza ngqo kuwe ukuhlawula Irhafu ulwazi lomsebenzi Womnatha iwebhusayithi kwagcinwa yi-NSDL kuba intlawulo irhafu. Unyuso - e-Ifayile-tab yesi - cofa 'Impendulo imali eseleyo Irhafu Yamanzi' (ukubonisa i-irhafu yamanzi) okanye Nqakraza 'e-Ahlawule Irhafu' (Ukwenza phambi-wazaliswa Challan kuba intlawulo) unga khangela nokuba refund wenziwe yiya kwinkunkuma nge Speed ngeposi okanye ukuba ngqo credited kwi nxowa yakho ngokuthi Urhulumente Bank ka-India. Unako kanjalo uqinisekise ukuqhubela isimo kwaye refund mba isimo yi-CPC okanye AO yi-elithile yakho e-Filing-akhawunti. Ukunqakraza kwi ngezantsi, uza kuba navigated ukuba Irhafu Ulwazi lomsebenzi Womnatha iwebhusayithi kwagcinwa yi-NSDL kuba ezibonisa ubume refund.
Imithetho enxulumene ubhaliso impahla eyenziweyo kwi-India Izindlu Iindaba